I-Reddit Ukuvimbela Igama elithi 'Ugibe' Ngeke Kukushintshe Ukubaluleka Kwayo - Okunye
I-Reddit Ukuvimbela Igama elithi 'Ugibe' Ngukulungiswa Kwezepolitiki Kuhambile MAD
Lokhu 'kukudala' ngalesi sikhathi kepha ngifuna ukukhuluma ngakho noma kunjalo.
Ngiqaphele ingxoxo ngesonto eledlule ngegama elithi 'isicupho' emphakathini we-anime. Eqinisweni ngakubona kuQuora ebuzwa ukuthi ngabe 'KULUNGILE' ukusebenzisa igama.
Le ngxoxo ngokusobala iqale kwaReddit, lapho omengameli bama-r / animemes benqabela igama.
Ama-meme we-backlash kanye ne-anime enziwe MAYELANA nezinqumo zabomengameli yilokho kuqhume yonke into phezulu.
Kungakho izindaba zisabalele kude nasemphakathini we-anime.
Kungani igama elithi anime 'ugibe' kuyinto embi?
Ngokuya ngeReddit's r / animemes:
'Igama' isicupho 'lapho lisetshenziselwa ukuchaza abantu belilokhu linempikiswano selokhu lasungulwa, futhi ikakhulukazi eminyakeni yamuva. Ngokubanzi nje, imiphakathi eminingi ilibheka kalula leli gama njengesiqubulo.
Isimo esidumazayo segama silele ekutheni abantu bazama ukukhohlisa ('ukubamba') abanye futhi ngokwengezelela akuvumelekile ukuthi babethula kanjani ubulili babo. Ukusetshenziswa nokusetshenziswa kabi kwetemu kubhekiswa kubo bobabili abalingiswa nabantu kuvame ukudala ukusulwa kwabantu abathutha futhi kuchithwe ukusebenza kwabo. ” - Omengameli beReddit
Ngokwesimemezelo sikaReddit, igama elithi 'isicupho' belilokhu liyimpikiswano selokhu lasungulwa…. Futhi imiphakathi eminingi ikubheka njengesilima. Okungelona iqiniso.
Abalandeli abaningi bazokutshela ukuthi leli phuzu lihlekisa kanjani futhi abaningi bakwenza kokuthunyelwe kwe-reddit.
Futhi umugqa wabo wokugcina othi usula abantu be- 'trans' kungenzeka ukuthi uyiphuzu elithakazelisa kakhulu kulesi simemezelo.
Uma kukhona okubagubhayo, futhi ungakusuli nakancane.
Abalandeli abaningi be-anime bazi kangcono kunalokho abantu abakubonayo, futhi abaningi abalokothi 'balisebenzise kabi' leli gama noma balisebenzise ngendlela enobungozi.
Okuhlobene: Izinhlamvu eziyi-15 ezihamba phambili ze-TRAP Anime ezinezidalwa ezididayo
Masingakhohlwa iReddit yinkampani yaseMelika
UDaruku Hoshino UGIBE.
E-USA bebelokhu bephikisana nabancane abancane isikhashana manje. Ikakhulukazi eminyakeni eyishumi edlule.
Izinkampani ezise-US pander ngoba:
Bayesaba ukubuyela emuva.
Ukwesaba kwabo akunangqondo.
Bafuna 'ukujabulisa' wonke umuntu (okuyinto engenakwenzeka).
Futhi ukulungisa ipolitiki kukwenza “ubukeke” muhle emphakathini.
Bheka, konke ngifuna ukulingana nayo yonke leyo jazz. Kodwa lokhu akuyona. AbakwaReddit batatazela kanzima ngisho nangobuqili bacindezela ama-ajenda abo, futhi bathulisa noma yini abangavumelani nayo.
Lesi akusona okokuqala futhi ngeke kube esokugcina, ikakhulukazi hhayi somphakathi we-anime ukubona njengoba kuhlaselwa entshonalanga.
Ngabe igama N livinjelwe kuma-r / animemes? (umbuzo ongaphenduli)
Ama-stereotypes nazo zonke izinhlobo ze-sh * t ziyacindezelwa ngegama le-N, ikakhulukazi ngabantu abangaveli ngisho esikweni (noma banikeze i-F).
Nginesiqiniseko sokuthi akulona ukuphela kwegama okungakaze kuthintwe noma kuthathwe ngokuthi 'kuyacasula' ngabomengameli beReddit, ngakho-ke kuyathakazelisa ukubona ukuthi UMGIBE wavinjelwa kanjani ngokushesha okukhulu nangamandla amakhulu.
Ngisho umuntu odlulayo udidekile 'nge-ban' yeReddit
'Ngingumuntu oguqukayo ... angicabangi ukuthi lokho bekuyikholi efanele. Leli gama linencazelo yokuthi uma lisetshenziswe kahle ngeke lidale ubungozi, inkinga ivela kuphela ekusetshenzisweni kabi kwamagama womabili ngoba abantu abangawaqondi noma abaqondi ukuthi ukuba yi-transgender nokuba yi-Crossdresser izinto ezehlukile.
Ngingaba nethemba ngokwengeziwe uma singanquma ukufundisa abantu esikhundleni sokuvala amagama. Kuyisikhathi nje ngaphambi kokuba uFemboy abe 'yisihla' cishe ngezizathu ezifanayo ngqo. Leli gama alidalelwanga inzondo, futhi lalisetshenziswa kakhulu ngezizathu ezifanele, noma iyiphi indlela yokubiza intombazane ngokuthi indoda iyacasula futhi iyalimaza, njengoba kungenjalo. ”
Lapho unabantu obabiza ngegama elithi 'kuyacasula' jikela bese uphikisana nephuzu lakho… Uyazi ukuthi wenza okuthile okungalungile.
I-Reddit yatholwa yidlanzana elikhulu, ingcosana efanayo ephakeme ezwelayo ku-Twitter namanye amapulatifomu lapho umhlaba ungazinakekeli izihloko zabo ezinesihloko esithi bullsh * t.
Babizwa ngokuthi 'yidlanzana elikhulu' ngesizathu, ngoba abantu abaningi abanjalo.
Ukuphawula ngentambo yeReddit kuwubufakazi.
Intambo yeReddit: https://www.reddit.com/r/Animemes/comments/i
Iyini imicabango yakho ngegama elithi 'isicupho' emphakathini we-anime?
Uzaki Chan Haters, Nokuthi Le Ntombazane Yama-Anime Isabangela Impikiswano Kanjani
Lokhu Kungakho Ama-Anime Ayoze Alunge Ngezepolitiki
Lezi Yizingcaphuno Ezinengqondo Kunazo Zonke Ezivela Ku-The Spice And Wolf Anime Series
Uzozithanda Lezi Zilinganiso ze-Rin Tohsaka ezivela ku-Fate Stay Night
Amavidiyo ama-Anime ama-11 AMAKHULU ku-YouTube Udinga Ukuqala Ukubuka
I-6 Of The Best Full Metal Panic Quotes Ozoyithanda Njengomlandeli Weqiniso We-Anime
Imikhumbi ye-Anime Ephikisana Kakhulu Eqhuba Abalandeli Ngobuqili
Imidlalo ye-Crunchyroll yokushicilela i- 'Mob Psycho 100: Psychic Battle' - IZINDABA
Abalingiswa be-Anime abayi-16 + Abathanda UKUGQOKA Hoodies!
uchungechunge oluphezulu lwe-anime lwesikhathi sonke
phezulu 20 anime sonke isikhathi